Oghere oghere oghere oghere efere nwụrụ anwụ Series - China Hollow Cross Section Plate Die Series Supplier, Factory –Jwell
Oghere Cross Nkebi efere Die Series
PC oghere efere mee ihe n'ọtụtụ ebe na rụrụ na decorations.The oghere okporo efere anwụ na feedblock nwere ike ime ka UV nchedo na abụọ.The ikpeazụ mmepụta na a max obosara nke 2100mm na nwere a elu mmetụta strengh, ezi ihu igwe na-eguzogide ma na UV protection.With mgbanwe elu na ala
ebu egbugbere ọnụ, mmepụta ọkpụrụkpụ ikwu njehie ike-achịkwa n'ime 3%; Ihe eji arụ ọrụ n'ime ụlọ na-enye kpo oku ngwa ngwa na nnweta ihu igwe dị elu.
nke ọwa ruru 0.015- 0.03um, nke na-eme ka nkwụsị na-egosi.
Dị iche iche imewe nwere ike izute dị iche iche chọrọ nke ngwaahịa, n'ozuzu polycarbonate oghere efere onye ọkpụrụkpụ bụ n'etiti 4 na 25mm, multi-n'ígwé efere dị ka H-cross ngalaba, X-cross ngalaba wdg, ọkpụrụkpụ nke ụfọdụ nwere ike iru 36mm, na UV enwere ike ikpuchi oyi akwa. Eyi, Pee oghere okporo efere mepụtara pụrụ iche na-anwụ bụ ìhè dara nha, dampproof na-enwe mmetụta dị elu, nke a na-eji dị ka
mgbasa ozi ìhè panel, ngosi upholster, ebu igbe wdg The ọkpụrụkpụ-nso bụ 2-12mm na obosara bụ 1200-2200mm.
The obi jụrụ agụụ calibrator na-arụpụtara si pụrụ iche mesoo ihe na-emesi kacha eyi eguzogide na deformation-free. Temperaturezọ mmiri dị iche iche na-achịkwa mmiri na usoro mmezi agụụ na-enye ohere mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ iji zute ihe onwunwe dị iche iche chọrọ maka ihe dị iche iche.
Waterproof mpempe akwụkwọ eriri igwe Die Series
JWZ-BM30F / 160F / 230F ise n'elu Bowl Fụọnụ Nkedo Machine